Xiaomi mepere Mi mbụ Store na Romania | Gam akporosis
Xiaomi gbasaa ọzọ na Europe site na imeghe ụlọ ahịa Mi mbụ na Romania
Xiaomi mepere ụlọ ahịa Mi mbụ na Romania, si otú ahụ gosi na ọ na-anọgidesi ike na atụmatụ ya ịgbasawanye ọbụna na Europe.
Storelọ ahịa Mi ohuru dị na ụlọ ahịa Mega Mall, na Bucharest, isi obodo mba ahụ. A nabatara nnukwu oghere ahụ mgbe a hụrụ ya n'anya mgbe ọtụtụ ndị hụrụ aha ahụ bịara hụ ngwaahịa ndị e gosipụtara.
Lọ ahịa ahụ jupụtara na ngwaahịa Xiaomi na-adịghị agwụ agwụ, sitere na smartphones ruo ihe enyemaka, igwe eletriki eletriki na ngwa ụlọ. A na-enye ngwaahịa ndị ahụ na ego dị egwu, ọkachasị maka ndị na-ebili n'isi n'oge na-eche ka ọ meghee ka ha bụrụ ndị mbụ ga-arịgo n'ala ya.
Nmeghe nke ụlọ ahịa Xiaomi Mi na Romania
Ndị ahịa mbụ 50 nwere ohere ịzụta nke ahụ Mi Mix 3 maka 2,199 lei (euro 460), igwe eletrik eletrik Mi M365 maka 1,799 lei (euro 380) na ọbụna Anyị 8 Pro maka 2,099 lei (euro 440). Ọzọkwa enwere onyinye pụrụ iche na ngwaahịa dị ruo Mee 5.
Site na ụlọ ọhụrụ a nke ụlọ ọrụ ahụ, Xiaomi eguzobewo onwe ya dị ka otu n'ime ndị na-emepụta ama ama nke na-emepe ụlọ ahịa kachasị n'ụwa. Onye oru ohuru a nwere otutu ulo ahia Mi na Italy, Spain, France, UK, Germany, Russia na obodo ndi ozo, ma mgbasawanye nke ụlọ ọrụ China yiri ka ọ ga-aga n'ihu.
Xiaomi ga-emepe Mi kasị ukwuu na Europe na Paris
Anyị nwere olile anya na ụlọ ahịa ndị ọzọ ga-anọgide na-apụta na ihu igwe ọhụrụ na ụbọchị ndị na-abịanụ. Agbanyeghị, anyị ga-arụtụ aka na nke ahụ ngwaahịa ndị dị na Storelọ Ahịa Mi karịrị ihe anyị tụrụ anya ya. Ndị a gbatịrị gafee smartphones na elele amamịghe na ngwa ụlọ ndị ọzọ amamịghe, igwe eletriki igwe, na ndị ọzọ. Obi abụọ adịghị ya na ịzụ ahịa na Mi Store bụ ihe dị iche na nke miri emi, ma e jiri ya tụnyere ime ya n'ịntanetị ma ọ bụ usoro ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi gbasaa ọzọ na Europe site na imeghe ụlọ ahịa Mi mbụ na Romania
Ahịa Huawei na-abawanye 50% na nkeji iri na ise